Maayirka Boorama waxa ka culus awoodda kursiga uu ku fadhiyo..By:- Abdirahman Aburaas – Awdaltoday
Maayirka Boorama waxa ka culus awoodda kursiga uu ku fadhiyo..By:- Abdirahman Aburaas
Maayirka Boorama waxa ka culus awoodda kursiga uu ku fadhiyo.. By.Abdirahman Aburaas
Maayirka magaallada Borama saleeban casan hadi waa mid ka mid ah maayiradda ay ragaadisay musuq-maasuqa iyo aqoon-darada iyo waliba xilka uu hayo oo uu ka awood badiyey.
Waxaanu la daalaa dhacayaa, awood darro uu ku maamulo xilka uu hayo shacabka Borama oo noqday qaar u hiloobay in ay helaan maayir aqoon iyo hawl karnimo leh ayaa gebi ahaanba ku hungoobay.
Saleeban ayaa ah kan ugu awoodda jilicsan maayiradda dalka intaa aan og ahay, waxaanu wali taagan yahay halkii uu taagnaa markii la doortay, walina muu muujin wax wax-qabad ah oo la taaban karo, waxaanu shilinka ummadda u samaystay xisaabaad gaar ah oo isagu leeyahay kuna shubo lacagta Shacabka.
Waxa kale oo dul hoganaya eedaymo iyo fadeexado balaadhan oo uu ku sameeyay mashaaricda faraha badan oo gobolka wax badan ka bedeli lahaa, waana tan keentay in gobolku noqdo mid ka aradan gebi ahaanba hor-u-markii looga baahnaa inay dawladda Hoose ee degmaddu samayso, tana waa mid dul hoganaysa.
Waxa uu musuq-maasuq baahsan ku sameeyey mashruucii JPLG oo ku tagri falay, isagoo u isticmaalaya habab sharciga baal-marsan oo dhac iyo boob badheedh ah, waxaanu maalin cad khiyaamo qaran iyo mid shacab kula kacay shacabka gobolka oo imika quus ka jooga.
Kaaaso ah inuu shacabkii u dhisay dariiq habeen lu burburay.
Waxa ay golaha deeganku gaar ahaan xildhibaan xayte ugu yeedhay dhalinyarada xaafada inay dayac tiraan wadadii saleeban macmalka ugu yaqleeelay walibana dariiqasi saleeban dhisidiisa lahaa waxa ay isku bedeleen ciid iyo dooxyo camuudi jiifto.
Maayirka xafiiskiisa waxa ka muuqata habacsanaan habka uu shaqeeyo xafiiskiisu, waxaanu subixii yimaadaa maalinta uu soo horeeyo 9:00 subaxnimo, halka maalmaha qaarna aanu ka soo ag wareegin.
Qodobadan hoos ku xusani waxay soo koobayaan maayirka waxa sababay in maayirku dhex muquurto xilka uu hayo:
Xilka uu hayo oo ka awood badiyay isagoon aqoon durugsan uu lahayn arrimaha siyaasada, khibradiisuna ku kooban tahay ururada gaarka looleeyahay
Karti yaraan iyo musuq-maasuq baahsan oo uu kula dhex jiro Golaha Deegaanka borama sida ay noo cadeeyeen xildhibaano ka tirsan golahaasi
Awood darro uu ku maamulo Gollaha uu hogaanka ka yahay.
Tani waxay ku tusinaysaa in uu gebi ahaanba maayirku xilka uu hayo Ilaahay meel dhow uga dhiibay, rag badan oo Golaha ka mid ah ay ka mudnaayeen in ay xilkaa qabtaan wax-qabad badana muujin lahaa oo ay shacabka Gobolkun kalsooni badan ku qabaan.
Daawo:- Jaamacada Camuud Maxay Ka Tidhi Inay Hoosu Dhac Ku Yimiday Ardaydii Gobolada Bari Uga Iman Jiray.
Awdal: Dallada Horumarinta Deegaanada Bariga Awdal Oo Maanta Dhagaxdhigtay Mashaariicda La Fulinaayo Sanadkani.